4 zvikonzero zvekudyara mune yakanaka inomiririra | ECommerce nhau
4 zvikonzero zvekudyara mune yakanaka inomiririra
Nhasi kune zvakawanda zvachose mahara ekugamuchira masevhisi. Zvakajairika kuti kana isu tiri kutanga munyika yezvigadzirwa zvemagetsi tinokwezva ne mukombe zverudzi urwu. Nekudaro, pane zvakawanda zvakanaka kana tikasarudza kuita mari mune yakanaka server.
1 Zvikonzero zvinoita kuti iwe usarudze kuisa mari muHoster yekuvandudza bhizinesi rako
1.1 Yese kutonga pamusoro pemufananidzo wepeji rako:
1.2 Mamwe akazara ekuchengetedza masystem:
1.3 Wana rutsigiro rwemunhu uye rubatsiro:
1.4 Rombo rekushambadzira risingaburitse mari:
Zvikonzero zvinoita kuti iwe usarudze kuisa mari muHoster yekuvandudza bhizinesi rako
Yese kutonga pamusoro pemufananidzo wepeji rako:
Kana uchihaya yakabhadharwa yekutambira sevhisi iwe unokanganwa nezve izvo zvinorambidzwa izvo varidzi vemahara vanoisa. Domain yako inozoitwa yemunhu uye iwe unogona kushandisa iwo mavara marangi aunosarudza. Kana iwe usingazive maitiro ekuronga, pachave nematemplate ayo anoita kuti basa rako rive nyore webhu bhizinesi zvachose pane zvaunoda.
Mamwe akazara ekuchengetedza masystem:
ari webhu maseva yakabhadharwa inosanganisira iyo sarudzo yekuwedzera zvibvumirano zvekuchengetedza senge SSL kana nzira dzekubhadhara, Kuita kuti zvese zvawakaita zvive zvakachengeteka.
Wana rutsigiro rwemunhu uye rubatsiro:
At kubata makambani Ivo vanofarira kuti iwe ugare navo, ndosaka ivo vachatsvaga kufambisa yako yemushandisi ruzivo. Kana dambudziko rikamuka nepeji rako, pachave nechikwata chevanyanzvi pachinhu ichi vachitsvaga kukupa mhinduro kune chero mamiriro ezvinhu angamuka.
Rombo rekushambadzira risingaburitse mari:
ari varidzi vemahara Ivo vanoita hupfumi hwavo nekusanganisira kushambadzira pamapeji ako iwe iwe ausina kukumbira uye ayo iwe ausiri kuunza mari. Vakabhadharwa vaenzi Ivo havafanirwe kusanganisira kushambadzira pamapeji ako uye iwe chete ndiwe unosarudza kuti wobva waisanganisira ma ads kana kwete, hongu, iwe kuwana iyo purofiti iwe pachako.
Pasina kupokana, nezvose izvi zvakanaka isu tichakwanisa kupa yakazara uye inonakidza yekutenga ruzivo kune vese vatengi vedu. Nenzira iyi isu tichava nechokwadi kubudirira uye kukura kwebhizinesi redu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » eCommerce » nemitambo » 4 zvikonzero zvekudyara mune yakanaka inomiririra
Maitiro ekuita pakurwiswa kwewebhu pane peji redu
Kutengesa kwepanyama mune chaiyo vhezheni